पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नियम उल्लंघन गर्दै स्वस्तिक छापसमेत देखिने गरी सार्वजनिक गरे मतपत्र - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नियम उल्लंघन गर्दै स्वस्तिक छापसमेत देखिने गरी सार्वजनिक गरे मतपत्र
३० बैशाख २०७९, शुक्रबार १०:२६
काठमाडौं । स्थानीय चुनावमा हुने मतदान गोप्य हुन्छ । कुनै पनि मतदाताले आफूले मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि कसैलाई देखाउन नमिल्ने प्रावधान छ ।
तर, यस्तो प्रावधानको एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै उल्लंघन गरेका छन् । पूर्वप्रधानमनत्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आज आफूले मतदान गरेको तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे । उनले राखेकोमध्ये एउटा तस्वीरमा मतपत्रमा लगाइएको स्वस्तिक छापसमेत देखिएको छ । यसबाट गोप्य मतदानसम्वन्धी नियम उल्लंघन भएको छ ।
डा. भट्टराईले गोरखाको पानापा १ अन्नपूर्ण मावि बूथमा बिहान ८ः२५ बजे मतदान गरेका थिए । लगत्तै उनले केही तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका हुन् । गोप्य स्थानमा मतदान गर्दै गरेको तस्वीरसमेत उनले राखेका छन् । जसमा तीनवटा स्वस्तिक छाप छाता चिन्हमा लगाएको देखिन्छ ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अनुसार यसरी मत संकेत सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । ऐनको दफा ९ मा मत संकेत सार्वजनिक गरेमा निर्वाचन अधिकृतले १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा नै मत संकेत देखाइदिएपछि उनी सो कारवाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।